झापामा यी प्रहरी नुहाउन गएका थिए, तर फर्कियो उनको शव! यस्तो रहेछ कारण | समाचार
September 14, 2021 NepstokLeaveaComment on झापामा यी प्रहरी नुहाउन गएका थिए, तर फर्कियो उनको शव! यस्तो रहेछ कारण
झापामा एक प्रहरी नुहाउन गएका थिए । तर उनी फर्केर आएनन् । ती प्रहरी जवानको पोखरीमा डु बे र मृत्यु भएको हो । झापाको कचनकवल गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित प्रहरी चौकी पिन्डलवारीमा कार्यरत २५ वर्षीय प्रहरी जवान सरोज गिरीको पोखरीमा डु बे र मृत्यु भएको जानकारी प्रहरीले दिएको छ ।
उनी नुहाउन गएका थिए । त्यसै क्रममा उनको सोमबार पोखरीमा डु’बे’र मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक राकेश थापाका अनुसार माछापोखरीमा डु ‘बे र प्रहरी जवान गिरीको मृत्यु भएको थियो ।
कचनकवल वडा नम्बर १ स्थित अवध राजवंशीसहित ८ जनाको लगानीमा बनाइएको माछा पोखरीमा गिरी नुहाउन गएका थिए । नुहाउने क्रममा हराएपछि उनको खोजी गर्दा पोखरीमा मृ त अवस्थामा फेला पारिएको थियो । गिरी २०७३ साल भदौ १५ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
आज विहान गैंडाकोटमा बस र ट्रक एकआपसमा ठो’क्किँ दा ३ जनाको मृत्यु, २४ घाइते
कमेडी च्याम्पियनका विजेता भरतमणीलाई योगेश भट्टराईद्वारा एक लाख सहयोग